Wasiirka Dalxiiska Jamaica wuxuu ku amaanay Maareynta COVID-19 waaxda Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiirka Dalxiiska Jamaica wuxuu ku amaanay Maareynta COVID-19 waaxda Dalxiiska
Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica, Mudane Edmund Bartlett (bidix) wuxuu leeyahay dareen aan kala go 'lahayn ee qof walba inta lagu jiro wada -hadal kooban ka hor intuusan bixin cinwaan isla markaana si rasmi ah uga furayo Huteelka Hilton Sabtidii, Luulyo 24, 2021. Wadaagga wadaagga ayaa ah (laga bilaabo bidixda 2aad) Aasaasaha iyo Madaxa Sare ee KATRS, Ann-Marie Goffe Pryce; Huteel Ian Kerr; Guddoomiyaha Guddiga, KATRS, Charmaine Deane iyo Guddoomiyaha Jamaica Hotel iyo Dalxiiska, Clifton Reader.
Iyada oo waaxda dalxiiska ay ilaalinayso ku dhawaad ​​boqolkiiba boqol u hoggaansanaanta waddooyinka Resilient Corridors tan iyo markii dib loo furay xuduudaha qaranka ee safarada caalamiga ah bishii Juun 100, Wasiirka Dalxiiska, Hon. Edmund Bartlett, wuxuu hoosta ka xariiqayaa waxtarka waaxda ee maaraynta masiibada COVID-2020.
Wasiirka Dalxiiska Bartlett wuxuu sheegay in ku qanacsanaanta iyo jebinta aan loo dulqaadan doonin maaraynta masiibada COVID-19.
Heerka wax-ku-oolnimada COVID-19 ee waddooyinka dhexdiisa waa 0.6 boqolkiiba.
Wasiirka dalxiiska ayaa ku kalsoon in waaxdu ay awood u yeelan doonto maareynta iyo yareynta saameynta noocyada kala duwan marka ay gaaraan Jamaica.
Wuxuu amaanay dadaalka hagar la’aanta ah ee Shirkadda Horumarinta Waxsoosaarka Dalxiiska (TPDCo), oo la shaqeyneysa Wasaaradaha Caafimaadka iyo Dawladaha Hoose ee ilaalinaya Waddooyinka Adkeysiga iyo ciqaabidda jebinta la soo sheegay sanadkii la soo dhaafay, si loogu suurtageliyo heerka sare ee u hoggaansanaanta hay’adaha dalxiiska.
Wasiir Bartlett wuxuu ka hadlayey dhammaadka usbuuca dhammaadka daahfurka Tababbarka Faa'iidooyinka Muhiimka ah & Xallinta Shaqaalaynta (KATRS), Jamaica oo ah tii ugu dambaysay ee lagu daray muuqaalka tababarka waxbarashada iyo xirfadaha, oo lagu qabtay Hotel Hilton ee Rose Hall, St. James. Shirkaddu waxay si gaar ah u bartilmaameedsatay qaybaha dalxiiska iyo hawsha ganacsiga (BPO) gaar ahaan laakiin waxay sidoo kale adeeggeeda u suuqgeysaa warshadaha iibka iyo tafaariiqda.
Iyada oo hoosta ka xarriiqaysa guusha guud ee waaxda ee maaraynta masiibada Mr. Bartlett wuxuu iftiimiyay in aan loo dulqaadan doonin is -qancinta iyo jebinta. Isaga oo si buuxda ula socda in qaybaha kale ay raadinayaan inay soo bandhigaan nidaamyo lagu maareeyo coronavirus, wuxuu yiri: "Waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysanno awood -siinta maareynta masiibada oo dhan," isagoo raaciyay haddii haddii dhammaantood la isu keeno si loo wado heerka maareynta, waxay awoodi doontaa inay sii waddo habkan suurtagelinta heerarka caabuqa oo hooseeya. ”
Heerka wax-ku-oolnimada COVID-19 ee waddooyinka dhexdiisa ayaa ah 0.6 boqolkiiba wasiirka dalxiiska ayaa kalsooni ku qaba in waaxdu awood u yeelan doonto maareynta iyo yareynta saameynta noocyada kala duwan marka ay gaaraan Jamaica. “Dalxiisku wuxuu ahaa lamaane mas'uul ah; annagu waannu maalgelinnay oo hudheellayaashu waxay gubeen lacag caddaan ah 14 -kii bilood ee la soo dhaafay si ay isugu dayaan inay isku hayaan qaybta oo soo -kabashada aan la kulannaa waa hawl ka mid ah allabaryadaas; ma doonayno inaan luminno arrintaas, ”ayuu yiri wasiir Bartlett.
Waxa uu sheegay in weli ay jirto waddo fog, isagoo tusaale u soo qaatay in qiyaastii 125,000 oo shaqaale dalxiis ah aysan weli ku soo laaban shaqooyinkooda. Dalxiiska dalxiiska waxay shaqaaleysiisaa ilaa 175,000 oo shaqaale ah, kuwaas oo badankoodu barakacay markii COVID-19 uu istaagay socdaalkii caalamiga ahaa sannadkii hore. Lixdii bilood ee la soo dhaafay, 50,000 oo shaqaale ah ayaa dib loo habeeyay. "Waa inaan dhaqaaqnaa si aan u soo ceshanno inta kale," ayuu yiri Mr. Bartlett.
“Marka, ma joojin karno hannaanka hadda; waa inaan dib isugu soo celinnaa hawsha inaan hadda ka gudubno waaxdeena oo aan la shaqeyno qaybaha kale si aan u hubinno in heerka u hoggaansanaanta ee aan gaarnay ay gaari karto dhammaan, ”ayuu yiri.
Arrinta ku saabsan helitaanka tallaalka, wuxuu sheegay in dalxiisku uu ka shaqeynayo jawaab -celin iyada oo la raacayo qorshe lagu arki karo qorshe loo qoondeeyay shaqaalaha dalxiiska si ay u helaan tallaalladooda. Natiijada waxaa la ogaan doonaa toddobaad kale.
Soo dhoweynta Faa'iidada Muhiimka ah, Mr. Bartlett wuxuu sheegay in tababarka iyo horumarinta raasamaalka aadanaha, oo ay weheliso maareyn taxaddar leh oo mas'uul ah ee masiibada, ay lama huraan tahay. Waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay dadka u leeyihiin dalxiiska, isla markaana ay tahay in mudnaanta koowaad la siiyo tababarka iyo horumarinta. Maaddaama masiibada ay xaddiday wejiga iyo wejiga, wuxuu sheegay in Xarunta Jamaica ee Dalxiiska Dalxiiska (JCTI) ay tababbartay 28,000 oo shaqaale ah.